Health and Wellbeing – Page 2 – FACT Zimbabwe
In 2011, FACT with support from Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH incepted a project “Strengthening HIV prevention among youths in Manicaland and Mashonaland West Provinces” targeting young people aged 15-24 years in Mutare rural, Makonde and Zvimba districts. The goal of the project is to contribute to the reduction of high-risk behaviour …
Supported by Population Services International (PSI) Zimbabwe since 2007, FACT has New Life Centres in Manicaland (Mutare and Chipinge) and Mashonaland West (Chinhoyi) Provinces of Zimbabwe. In Manicaland, the programme covers Mutare, Mutasa, Makoni, Chipinge, Chimanimani and Nyanga whereas in Mashonaland West the programme covers Kadoma urban, Makonde urban, Zvimba rural and Hurungwe districts. Working …
Supported by Population Services International (PSI) Zimbabwe, client initiated testing and counselling is the foundation of the prevention of HIV. The goal of FACT New Start Centres in Manicaland and Mashonaland West Provinces is to improve the quality of life and reduce the incidence of Sexually Transmitted Infections (STIs) and HIV among susceptible groups and …